Feysal Cali Waraabe” waan soo dhaweynayaa in dadka Soomaaliland ka soo jeeda ee Muqdisho ku sugan – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
MAREEG 25 November 2015 25 November 2015
Guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee Soomaaliland,Eng. Feysal Cali Waraabe ayaa sheegay in uu aaminsan-yahay shaqsi ahaan dadka ka soo jeeda Soomaaliland ee ku sugan magaalada Muqdisho inay shirarka ka qeyb-galaan, fikirkooda ka dhiibtaan.
Eng. Feysal Cali Waraabe waxaa uu meesha ka saaray inay matalaan Soomaaliland iyo axsaabteeda siyaasadeed,isagoo ku booriyay dadka ka soo jeeda Soomaaliland inay iska diidaan nidaamka wax qeybsiga beelaha 4.5, isla markaana haddii wax la qeybinayo lagu qeybsado sidii Koofur iyo waqooyi ee lixdankii sida uu yiri.
Waxuu sheegay Soomaaliland inay tahay dal gooni isaga taagay Soomaaliya inteeda kale, isla markaana muddo 25-sano shaqeyneyso, nidaam dowladnimo leh, iskuna filan, isla markaana nabadgelyo ah.
“Waxii quseeya Soomaaliland ee dan ka leh Muqdisho ma tagaan ee Hargeysa ayay yimaadaan oo ah Caasimada Jamhuuriyada, dadka jooga Xamar asal ahaan Somaliland ayay ka soo jeedaan, xaq bey u leeyihiin inay meeshey doonaan tagaan, fikirkooda iyo ra’yigooda ay dhiibtaan, laakiin ma ahan go’aan Xisbi Somaliland oo kale”ayuu yiri Eng. Feysal Cali Waraabe oo la hadlayay mid ka mid ah Idaacadaha Muqdisho.
Warka ka soo yeeray guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee UCID Feysal Cali Waraabe ayaa imanaya xilli magaalada Muqdisho lugu qabtay 22-bishan shir ay isagu yimaadeen bulshada ka soo jeeda Soomaaliland ee ku sugan magaalada Muqdisho, waxaana shirkaas looga hadlayay hanaanka doorashooyinka Soomaaliya ee sanadka 2016 iyo nooca doorasho ee la qaadan doono.
Wada-tashi lugu raadinayo nidamka ugu haboon ee ay noqon karto doorashada dalka ka dhacaysa sanadka 2016 ayaa lugu qabtay dalka oo dhan,waxaana aragtida laga raadinaya hoggaamiyayaasha iyo bulshada qaybaheeda oo ay ka mid yihiin dadka ka soo jeeda waqooyiga dalka.